Ody varatr’i mompera • AoRaha
Ody varatr’i mompera
Takatra ihany ny dikan’ireo fepetra vaovao miaraka amin’ny fialana tsikelikely amin’ny fihibohana rehefa niampy ny fanazavan’ireo tompon’andraikitra sasantsasany teto amin’ny firenena. Miditra ao anatin’ilay antsoina hoe « fiarovan-tena faobe » na « immunité collective » isika, matoa entanina hiaraka hiaina amin’ ny tsimok’aretina “Covid-19” ny ankamaroan’ny faritra eto Madagasikara (jereo lahatsoratra ao amin’ny pejy faha-4). Paikady iray heverina handresena ny fiparitahan’ny valanaretina izy io nefa hanomezana aina indray ny fiainam-pirenena ankapobeny, indrindra ny sehatry ny toekarena, satria manomboka miverina mihodina ny raharaha amin’ny ankapobeny.
Misy anefa ny risika ho an’ny firenena mahantra tahaka antsika, miaraka amin’ilay foto-pisainana efa zatra ny goragora. Tsy midika ho famelana ny fifindran’ny tsimok’aretina mihitsy ny fampiarovan-tena ny daholobe, amin’ny alalan’ny famerenana ny fiainana andavanandro amin’ny laoniny. Tsotra ihany ny teny baiko: ny fitandremana amin’ny lafiny rehetra, dia ireo fepetra ara-pahasalamana efa tokony ho hain’ny besinimaro tsianjery (fanajana ny elanelana iray metatra; fanaovana ny aron-tava; fifadiana ny fisokirana orona na fikitihana ny vava sy ny maso raha tsy mbola nanasa tanana; ny fanasana tanana matetika amin’ny savony na fampiasana ny tsiranoka mamono tsimok’ aretina; fikohafana na fievonana eo amin’ny lanton-tsandry).
Firenena vitsivitsy no nampihatra an’io « fampiarovan-tena faobe » io saingy tsy mbola nisy nanamarina ny fahombiazany, hatreto. Fahendrena ny misoroka toy izay mitsabo, fa angamba tsy hisy hirary ny hahazo ny aretina, satria na inona na inona valanaretina azon’ ny tsirairay, dia sady hiteraka tebiteby no handany andro sy vola!
Vahoaka adaladala, vahaolana adaladala